Globilab Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
Globilab Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android
Salama daholo, tafaverina miaraka amina rindranasa Android mahatalanjona iray ho an'ny mpianatra ambaratonga 12 sy ny ray aman-drenin'izy ireo izahay antsoina hoe Globilab. Izy io no fampiharana Android tsara indrindra, izay manolotra fitaovana samihafa hanaovana tetikasa siansa sy andrana.
Araka ny fantatrao, ny ankizy tsy tia mandray anjara amin'ny tetik'asa any an-tsekoly. Noho izany, misy fomba samihafa, izay ahafahan'ny ray aman-dreny manangana ny fialam-boly amin'ny fandraisana anjara amin'ny zanany. Noho izany dia misy hetsika samihafa hita amin'ny Internet, fa raha tianao hampiseho ny fahalianany ny zanakao dia zahao ity rindranasa ity.
Ity rindranasa ity dia manome fitaovana an-taonina maro, izay ahafahan'ny mpianatra manao fanandramana samihafa. Tsy manolotra fanandramana ara-tsiansa fotsiny izy io, misy fitaovana an-taonina maro hafa, izay ahafahan'ny mpianatra mandinika lalina ny lohahevitra hafa.
Hizara ireo fiasa rehetra ato amin'ity rindrambaiko ity izahay, ao anatin'izany ireo fitaovana samihafa ho an'ny lohahevitra samihafa. Noho izany, raha te hijery ity rindranasa ity ianao, alohan'ny hampiasana azy. Mila mijanona miaraka aminay vetivety fotsiny ianao ary mahalala momba izany. Azonao atao ihany koa ny mifandray aminay raha misy ady amin'ny app ity.
Topimaso momba ny App Globilab
Izy io dia rindranasa Android, izay novolavolain'ny Globisens Ltd. Lalao natao ho an'ny fanabeazana novolavolaina, izay manolotra fitaovana samihafa ho an'ny mpianatra kilasy 12. Tsy voatery ny mpianatra 12 ihany no afaka miditra amin'ity fampiharana ity. Ka na iza na iza dia afaka mampiasa ity rindranasa ity izay te-hahazo ny vaovao.
Manolotra sensor mihoatra ny 15 ao anatiny izy io, izay manangona angona. Izy io dia mitahiry ny angona amin'ny fitaovana Android anao. Saingy tsy manangona angon-drakitra ho azy manokana. Tsy maintsy misafidy ny tetikasa na fitaovana tianao hidirana ianao. Raha miasa amin'ny Sound ianao dia manolotra metatra fanamafisam-peo ho an'ny tetikasa fizika.
Izy io dia manome metatra hamandoana, izay ahafahan'ny mpianatra mamita andrana simika. Izy io dia manome sensor voarindra tsara indrindra, izay manome traikefa tsara indrindra amin'ny tetikasany ny mpianatra. Izy io koa dia manome sensor accelerometer, handrefesana ny hafainganam-pandeha.
Izy io koa dia manolotra fitaovana, ho an'ny taranja Jeografia. Izy io dia manome GPS Google Position System miaraka amin'ny fampiasa zoom sy panning. Azonao atao koa ny mitahiry rakitra. Izy io koa dia manome fanitsiana, famafazana, ary endri-javatra hafa, izay azonao ampiasaina mba hahatonga azy ho manintona kokoa.
Misy endri-javatra mahagaga maro kokoa, izay azon'ny mpianatra ampiasaina mba hahatonga ny tetikasa ho mahasarika. Azonao atao ihany koa ny mijery ireo endri-javatra hafa amin'ity fampiharana ity, amin'ny fametrahana azy amin'ny fitaovana Android anao. Noho izany, apetraho ity fampiharana ity ary mahazo fidirana amin'ny tontolo andrana tsara indrindra.
Anaran'ny fonosana com.globisens.globilab
Developer Globisens Ltd.
Rehefa nizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe indrindra taminareo rehetra tao amin'ny fizarana etsy ambony izahay, dia misy mihoatra noho izay azonao trandrahana amin'ity app ity. Azonao atao ihany koa ny mizara ny traikefanao aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe izahay, miaraka aminareo rehetra ao amin'ny lisitra etsy ambany.
Fitaovana sary mialoha
Manana fampiharana mitovy amin'izany izahay ho an'ny mpianatra, manantena izahay fa hahaliana azy ireo izany.
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io ary manome rohy koa izahay. Ka raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao dia mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny. Any amin'ny farany ambony sy ambany ity pejy ity no misy azy. Tsindrio ny bokotra ary miandrasa segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia mila manova ny toe-javatra ianao. Mba hanaovana izany, mandehana fotsiny amin'ny Settings ary sokafy ny Panel Security, avy eo Checkmark 'Source tsy fantatra'. Raha vantany vao vita ity dingana ity, azonao atao ny mametraka an'io fampiharana io amin'ny fitaovanao.
Globilab Apk no fampiharana tsara indrindra hampivelatra ny fahalianan'ny mpianatra amin'ny fianarana. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary ampidiro ireo fiasa maimaim-poana amin'ity fampiharana ity. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Tools Tags Globilab, Globilab Apk, Globilab App Post Fikarohana
Fampidinana fampiharana Urlebird ho an'ny Android [fanavaozana 2022]
Company Of Heroes Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android